"Noho ny habeazan’ny fampahoriana no itarainan’ny olona ; eny, minananana izy noho ny sandrin’ny mahery, nefa tsy misy manao hoe : Aiza Andriamanitra, Mpanao ahy? " Joba 35:9,10
"Efa nahafoy Ahy, loharanon’aina, izy." Jeremia 2:13
Izany no lohatenin’ny boky iray nosoratan’i S. Hessel, nivoaka tamin’ny volana oktobra 2010. Vokatry ny hevitra novoizin’izany boky izany, dia teraka tamin’ny volana mey 2011 tany Espaina ny hetsik’ireo Tezitra, ary niely tany ivelany. Ahoana tokoa moa no tsy ho tezitra, manoloana ny haben’ny tsy fahamarinana sy tsy fitoviana fari-piainana eto amin’izao tontolo izao! Mbola tsy lehibe tahaka izao ny elanelana eo amin’ny mahantra indrindra sy ny manankarena indrindra, mihasahisahy aoka izany ny mpandraharaha any amin’ny tranombola, ny vola no mibaiko izao tontolo izao.
Inona àry no hatao? Tokony hiady ve, mba hampihetsika zavatra? Izany ve no vahaolana mba hahatonga izao tontolo izao hihatsara? Izay mino an’Andriamanitra, mino izay lazainy, dia tsy tokony hamita-tena. Mioitra ao anaty faharatsiana isan-karazany ny zanak’olombelona, ary hazavain’ny Baiboly amintsika ny anton’izany: amin’ny ankapobeny ny olona dia nandà ny Mpahary azy. “Hadinoinao Andriamanitra Izay nahary anao. Ary Jehovah nahita izany ka nandà … ny zanany lahy sy ny zanany vavy. Dia hoy Izy: Hafeniko azy ny tavako; ho hitako izay hiafarany; fa firenena tena mpivadibadika izy” (Deoteronomia 32:18-20). Ny fikirizana hitady vahaolana ivelan’Andriamanitra sy ny fahefany, dia tsy hitondra afa-tsy fahadisoam-panantenana, satria Andriamanitra irery no loharanon’ny rano velona, izay afaka manome fiadanam-po, fahendrena, ary tena fahasambarana.
Koa tezera, saingy aoka hijery ny tenantsika aloha. Tezera manoloana ny ota mitoetra ao anatintsika, izay miseho raha vao misy hirika kely. Tezera noho isika tia tena sy tsy manam-pitiavana ny namantsika. Manatòna, amin’ny fo manontolo, Ilay Andriamanitra nahary antsika sy te hamonjy antsika!